तीन दिनसम्म मौसम बदली, केही भागमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना - Jhilko
तीन दिनसम्म मौसम बदली, केही भागमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं २६ मंसिर । बिहीबारदेखि बर्षा र हिमपात हुन भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बिहीबार रातिदेखि तीन दिनसम्म मुलुकका अधिकांश ठाउँमा मौसम बदली, केही भागमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात हुने जनाएको छ ।
सागमा ७० लाखको फूलको कारोबार
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै
राष्ट्रपति भण्डारीको शक्ति अभ्यास !
राष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी वैठक चलिरहेका बेलाको यो भोज वैठक एक ताजा उदाहरण मात्रै...
आफैंले बोकेको बन्दुक पड्कियो
बुलिङटार गाउँपालिका–४ बस्ने ४६ वर्षीय नर बहादुर मगरको साथबाट १ थान भरुवा बन्दुक...
'दीपावलीको उज्यालोले नयाँ यात्राको संकेत गर्नेछु' मन्त्री भट्टराईले भने. 'उद्‍घाटनको...
चीन र पाकिस्तानका तीन शहर एक आपसमा दिदी बहिनी घोषित
चीन र पाकिस्तानका तीन तीन शहर एक आपसमा दिदीबहिनी घोषणा गरिएका छन् ।